Hiddenite - Nlekọta vidiyo na-emepụta emerald green - nke vidiyo
Zụta ihe nzuzo dị na ụlọ ahịa anyị
Hiddenite bụ ụdị ndụ dị iche iche spodumene a na-eji ya dị ka nkume dị elu.
Nlereanya mbụ nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dị iche iche spodumene nwetara banyere 1879. N'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ obere ebe obibi nke White Plains, n'ebe ọdịda anyanwụ Stony Point, Alexander County, North Carolina, USA.
Dị ka akụkọ ndị dị n'oge a si kwuo, otu nwa okorobịa aha ya bụ Lackey mere ka JAD Stephenson chebara ya echiche. Onye na-azụ ahịa n'ógbè ahụ bụkwa onye nchịkọta mineral.
Ná mmalite, acha acha odo odo-acha odo odo spodumene e chere na ọ bụ diopside. Stephenson wetara nchọpụta ahụ gaa n'ihu nke onye nyocha banyere ihe banyere mbara ala bụ William Earl Hidden. Ọ nọ na-achọ isi iyi nke platinum na North Carolina. Mgbalị ọ bụla, na na n'onwe ya, emeghị nke ọma.
Mgbe ahụ, o zigara J. Lawrence Smith ihe atụ nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ na-adịghị mma. Ọkachamara na ọkachamara n'ihe banyere ọgwụ na Louisville, Kentucky.
Smith na-akọwapụta ụdị ihe ahụ dịka ihe dịgasị iche spodumene. Ọ kpọrọ aha ahụ "zoro ezo" maka nsọpụrụ nke Ezobe.
N'ikpeazụ, aha nkume ahụ gbanwere "Hiddenite", bụ ebe mbụ a chọtara ha.
N'oge hey hey nke 1880s na 1890s, ndị na-egwupụta egwu nkume na-ahọrọ aha "lithia emerald". Zoro ezo ghọtara uru nke emeralds na ikike nke nnukwu akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ọhụrụ spodumene. O nwetara traktị nke ala dara ogbenye, nke bụ ma saịtị nke nchọpụta mbụ ma ọ bụ nso ya, maka $ 1500. Ndị ụlọ ọrụ Emerald na Mining Company haziri ihe ndị a na-eme na saịtị ahụ na-enweta ngwa ngwa na nkume
Ebee ka ịchọta ndị Hidden?
Anyị nwere ike ịchọta ya na USA, Brazil, nakwa na China, na Madagascar.
Enwere esemokwu dị iche iche banyere ụfọdụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ spodumene. Ụfọdụ chọtara na Afghanistan na Pakistan. Ndị na-ahụ maka ịnweta na ịnweta nchebe na-arụrịta ụka banyere ajụjụ ma ọ bụ ma ọ bụ: Ọ bụ na anyị ga - akpọ "zoro ezo" ihe na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ green? Mkpụrụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ nwere ike ịgbanwe site na irradiation na bụ onye mgba ọsọ.
Zoro ezo si Pakistan: